Wrinckles & mavanga Vagadziri & Vatengesi - TAIWAN Wrinckles & Mitsara Fekitori
CO2Laser inzira yakajairika yekugadzirisa vanga uye kuunyana kwemakwenzi. Nemablative laser kurapwa, kunobuda kwakakura mhedzisiro yeganda kumutsazve, vanga rekugadzirisa uye kuunyana kwemakwenzi. Isu tinopa ST-350 semhinduro dzakanakisa dzeganda rakakomba.
kuti uwane kusimudza kweganda nenzira isinga pinde. Iko kukwirira kwakanyanya kwakatariswa
CO2 Laser inzira yakajairika yekugadzirisa vanga uye kudzikisira kuunyana. Nemablative laser kurapwa, kunobuda kwakakura mhedzisiro yeganda kumutsazve, vanga rekugadzirisa uye kuunyana kwemakwenzi. Isu tinopa ST-351 semhinduro dzakanakisa dzeganda rakakomba.
Fiber Laser tekinoroji yakasimudzwa yekumutswa kweganda uye kugadzirisa vanga. ST-250, iyo inotsemuka uye isiri-yekudzikisira fiber laser inonongedza mvura yemhashu uye inogadzira madiki ekurapa nzvimbo isina kukuvadza maseru akapoterera; Naizvozvo, inoita mibairo mikuru ine yakaderedzwa nguva yekuzorora.